सामुदायिक विद्यालयमा पढेकालाई सरकारले प्रोत्साहित गर्छ - Karobar National Economic Daily
सामुदायिक विद्यालयमा पढेकालाई सरकारले प्रोत्साहित गर्छ
query_builderAugust 30, 2017 10:22 AM supervisor_account visibility1318
गोपालमान श्रेष्ठ उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री
उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षाक्षेत्रमा केही गर्ने सोचसहित स्वेच्छाले शिक्षा मन्त्रालय रोजेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको पार्टी उपसभापतिसमेत भइसकेका श्रेष्ठले यसअघि वाणिज्यमन्त्री, वनमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।
उनी पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवार राज्य मात्र नभएर शिक्षक तथा अभिभावक पनि हुनुपर्ने बताउँछन् । हालको शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक नभएकाले देश विकासका लागि शिक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
पछिल्लो समयमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले सामुदायिक विद्यालयको संरक्षण र सम्बद्र्धन स्थानीय प्रतिनिधि, शिक्षक तथा अभिभावकले गरेको खण्डमा राम्रो परिणाम आउने श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयबाट पास गरेका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले कसरी अभिभावकलाई विश्वास दिलाएर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी लैजाने भनेर सोचिरहेको उनले बताए । श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको साढे दुई महिनाको अवधिमा अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन तथा डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई समेत सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि शिक्षकलाई राजनीतिमा प्रयोग नगर्ने प्रण सबै राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ । अहिले गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नभएकाले मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउने श्रेष्ठसँग समग्र शिक्षा प्रणाली तथा हालको अवस्थामा कारोबारकर्मी भुवन पौडेल र गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार :
शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको साढे दुई महिना भएको छ । यो अवधिमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
मैले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने सन्दर्भमा कतिपय मन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालय रहन्छ कि रहँदैन, तपाईं किन जानुहुन्छ ? भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए । तर, मलाई शिक्षाक्षेत्रमा पनि केही गर्न सक्छु कि भन्ने इच्छा लागेर आएको हुँ ।
हाम्रा शुभचिन्तकहरूले कांग्रेसले शिक्षा मन्त्रालयलाई अपहेलना ग¥यो, शिक्षा मन्त्रालय रोजेन भनेको अवस्थामा शिक्षाक्षेत्रमा केही सुधार गर्न सक्छु कि भनेर म आफैंले रोजेर शिक्षा मन्त्रालयमा आएको हो ।
अझै पनि ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन् । तपाईं शिक्षामन्त्री भएको नाताले यो क्षेत्रको सुधारका लागि के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
हालको समय अझै पनि संक्रमणकालको अवस्था हो । अहिले हामीले स्थानीय तहमा नै अधिकार दिँदै आएको अवस्था छ । हाल नगरपालिका र गाउँपालिकामा सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको अवस्था छ ।
साथै, सारा कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि मिलाउनु छ । त्योसँगै शिक्षाको कुरा गर्दा हालसम्मको शिक्षा पद्धति कोरा छ । यसले मुलुकलाई फाइदा दिएको छैन । झोलाभरि शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र भएका युवाहरूसँग व्यावहारिक अनुभव छैन ।
हामीले शिक्षा दिएका छौं तर दक्ष बनाएका छैनौं । यो मुलुकको विकासका लागि व्यावहारिक शिक्षाको आवश्यकता छ ।
युवाहरूले डबल डिग्री गरेर पनि उपयोगिता छैन, बेरोजगार छन् । नेपालमा उद्योगधन्दा नभएकाले शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरू पनि बेरोजगार बस्नुपरेको अवस्था छ । ती सम्पूर्ण युवालाई सरकारी जागिरमा मात्र खपत गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
जसका कारण शिक्षित र योग्य व्यक्तिहरू पनि रोजगारीका लागि बिदेसिनुपरेको छ । तथ्यांकले ५० लाख भने पनि ६० लाख युवा रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जानुपरेको अवस्था छ । तीमध्ये अधिकांश खाडी मुलुकमा छन् । केही विकसित राष्ट्रहरूमा पनि छन् । पछिल्लो समयमा दक्षिण कोरियामा जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
त्यसो हो भने दक्ष र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि सरकारसँग कस्ता योजना छन् ?
हामीले शिक्षा दिएका छौं तर दक्ष बनाएका छैनौं । यो मुलुकको विकासका लागि व्यावहारिक शिक्षाको आवश्यकता छ । तीक्ष्ण दिमाग भएका विद्यार्थी र मध्यमवर्गीय विद्यार्थी गरेर छुट्ट्याएर शिक्षा दिनुपर्छ ।
पहिलो ग्रेडका विद्यार्थी डाक्टर, इन्जिनियर बन्छन् भने मध्यम खालका विद्यार्थीलाई भोकेसनल शिक्षा दिनुपर्छ । मध्यम खालका विद्यार्थीलाई डेढदेखि दुई वर्षको योजना बनाएर व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ । यसका लागि पोलिटेक्निकल स्कुलहरू खोल्नुपर्छ ।
विद्यार्थीलाई व्यावहारिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीलाई प्लम्बर, वाइरिङ गर्ने, पेन्टर, सिकर्मी, डकर्मीलगायतको खाँचो छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न कुनै एक विषयमा मात्र केन्द्रित गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । एसईई पास गरेपछि पनि सबै विषय होइन कि मध्यम विद्यार्थीलाई कुनै एक विषय पढाएर पोख्त बनाएर निकाल्नुपर्छ ।
सरकारले यस्ता व्यावसायिक तथा प्राविधिक क्षेत्रको शिक्षा सहज रूपमा लिन सक्ने बनाउन देशका सबै स्थानमा शैक्षिक संस्थाको अवधारणा ल्याउनुपर्ने होइन र ?
अन्य व्यावसायिक शिक्षाजस्तै नेपाल कृषिप्रधान देश भएको नाताले पनि कसरी खेती लगाउने तथा भिœयाउने भन्नेसम्बन्धी तालिम दिनु आवश्यक छ । देशमा शान्ति–सुव्यवस्था स्थापना गरेर टुरिजममा धेरै विकास गर्नुपर्ने छ ।
त्यसका लागि गाइडको आवश्यकता पर्छ, होटल तथा रेस्टुराँमा काम गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । नेपाली युवालाई दक्ष शिक्षा आवश्यक छ । व्यावहारिक शिक्षा दिएको खण्डमा बिदेसिने समस्या समाधान भई आन्तरिक विकासको गति अघि बढाउन सकिन्छ ।
व्यावहारिक शिक्षा दिएको खण्डमा बिदेसिने समस्या समाधान भई आन्तरिक विकासको गति अघि बढाउन सकिन्छ ।
त्यसका लागि कुनै पनि युवाले पढेर सिध्याउँदा नै दक्ष भएर निस्कने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) छ । सिटिइभिटीले आन्तरिक विकासका लागि जनशक्ति तयार गर्ने गरी काम गर्न भनेको छु । हामीकहाँ एसईई पास भए पनि बाबुबाजेले गरेकै कम गर्ने प्रचलन छ । यो अभ्यास ठीक होइन । पहाडका खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन् ।
गाउँमा हे¥यो भने वृद्ध र बालबालिका बाहेक कोही छैनन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले निर्वासनबाट स्वदेश फर्कंदा भन्नुभएको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि आर्थिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ ।
मुलुकको विकासका लागि हामी एक हुनुपर्छ । त्यसका साथै विदेशी लगानी भिœयाउने पहल गर्नुपर्छ । यसरी नै हामीसँग प्रकृतिले दिएको सौन्दर्य प्रयोग गरेर पर्यटन व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले पाठ्यक्रममा नै पर्यटनका विषयहरू राखेर पढाइनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र विस्तार गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमै ठूलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार भएन भन्ने छ, यस विषयमा तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस विषयमा म धेरै चिन्तित छु । हामी विद्यालय र कलेज पढ्दा गुरुसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध राख्थ्यांै । गुरु र चेलाको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर हुन्थ्यो । गुरुलाई देवो भवः मान्थ्यौं । तर, अहिले गुरुलाई देवो भवः मान्ने चलन छैन ।
अहिले उस्तै परे गुरु–चेला सँगै बसेर चुरोट खाने तथा खैनी मोलेर बस्ने वा अन्य विकृतिका काम गरेर बस्ने अवस्था छ । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका गुरुहरू ‘ड्युटिफुल’ भएनन् । मेहनत गरेनन् । त्यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको पढाइ राम्रो हुन सकेन ।
त्यसका साथै अनुशासन पनि राम्रो कायम रहन सकेन । त्यसले गर्दा च्याउसरि गाउँगाउँमा बोर्डिङ स्कुल खुले । हाम्रा गुरुहरू आफूले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने र आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउने गर्नुहुन्छ ।
सरकारले त सामुदायिक विद्यालयबाट पास गरेको विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्छ । म गुरुवर्गलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु । गुरुहरू पङ्च्युअल भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिदिनुप¥यो । विद्यालयको शैक्षिक स्तर कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लागिदिनुहोस् ।
विद्यालयलाई अंगे्रजी माध्यमबाट सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ भने त्यो पनि गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । ठाउँठाउँमा केही विद्यालय धेरै राम्रा पनि छन् । विद्यालयको प्रधानअध्यापकले आफू पनि जिम्मेवार भएर अरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुप¥यो ।
आफू अनुशासित भएर अरूलाई पनि अनुशासनमा राख्नुप¥यो । गुरुहरूले शिक्षणलाई मूल पेसा हो भनेर काम गरिदिनुप¥यो । नेपाल सरकारले गुरुहरूलाई अन्य कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा दिएको छ । त्यसले गर्दा गुरुहरूले आफ्नो पूर्णकालीन पेसालाई जिम्मेवार ढंगबाट निर्वाह गर्नुप¥यो ।
हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका गुरुहरू ‘ड्युटिफुल’ भएनन् । मेहनत गरेनन् । त्यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको पढाइ राम्रो हुन सकेन ।
अभिभावको विषयमा कुरा गर्दा आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा राम्रो होस् भनेर गिट्टी कुटेर भए पनि राम्रो स्कुलमा पढाउने भावना देखिन्छ । अब सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय स्तरमा गएकाले हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती विद्यालयलाई रेखदेख गरेर अघि बढाएको खण्डमा अवश्य पनि राम्रो रिजल्ट दिनेछ ।
अभिवावकले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन कुुनै पनि सम्झौता नगर्ने भावनाको विकास भएको छ । तर, पछिल्लो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै व्यापारीकरण भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामी अभिभावक पनि जिम्मेवार छौं । आफ्ना बालबच्चा स्कुल गएर पढेका छन् कि छैनन् ? के पढेका छन् ? यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । गुरुवर्गले पनि विद्यार्थीले पढेको छ कि छैन, यसमा ध्यन दिनुपर्छ ।
हामीले शिक्षाका लागि धेरै खर्च पनि गरेका छौं । गाउँमा विद्यालय भए पनि मान्छे नभएका कारण मर्जर गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । विद्यालय नभएको ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने क्रम सुरु भयो । अहिले विद्यालय धेरै भएको अवस्था छ । कतिपय स्थानमा विद्यालय र गुरु भए पनि विद्यार्थी नभएको अवस्था हो । यसका लागि सरकारले अभिभावकलाई विश्वास दिलाएर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी लैजाने भनेर सोचिरहेका छौं ।
शिक्षाको गुणस्तर नसुध्रिनुमा शिक्षकहरूले राजनीति गरेर हो भनिन्छ नि ?
यसमा हामी राजनीतिकर्मीहरूको पनि कमजोरी हो । चुनावको समयमा राजनीतिक पार्टीले गुरुलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा गुरुहरूले पार्टी छ नि त भनेर मनोबल उच्च बनाउने गरेको अवस्था छ । शिक्षकलाई राजनीति गर्न पाइन्छ भनेको छैन । नियमअनुसार शिक्षकले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन ।
यसका लागि संयुक्त रूपमा सबै पार्टी बसेर गुरुहरूलाई राजनीतिमा सहभागी नगराउने प्रण गर्नुपर्छ । यहाँ लेबी तिर्ने कर्मचारी तथा गुरुवर्गहरू छन् । कांग्रेसको सन्दर्भमा सहानुभूति राख्ने कर्मचारी तथा गुरुहरू छन् । तर, कांग्रेसले आजसम्म गुरुहरू तथा कर्मचारी कसैसँग पनि लेबी लिएको छैन । यसमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप गरौं । विगतका परिवर्तनहरूमा गुरुहरूको योगदान ठूलो रहेको छ ।
आफ्ना बालबच्चा स्कुल गएर पढेका छन् कि छैनन् ? के पढेका छन् ? यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
त्यो समय संक्रमणकालीन अवस्था थियो । अब मुलुकको विकासका लागि शिक्षामा खेलाबाड गर्नु हँुदैन । गुरुवर्गलाई गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ । एकपटक कृष्णप्रसाद भट्टराईले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुभयो । त्यसपछि यो समस्या समाधान हुनुपर्ने हो नि ? तर, भएन ।
फेरि अस्थायी शिक्षकहरू भर्ना हुँदै गए । राजनीतिक तथा बेरोजगारीको दबाबले गर्दा अस्थायी शिक्षकहरू बढे । अहिलेको सन्दर्भमा पनि अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या जस्ताको तस्तै छ । त्यसको समाधानका लागि म अघि बढेको छु ।
अस्थायी शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले के–के योजना बनाइरहेको छ ?
अस्थायी शिक्षकका मागको कुरा गर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बोल्ड निर्णय भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यस बेलाका सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाइदिनुभएको थियो ।
तर, त्यसपछि रहेका अस्थायी शिक्षकको समस्या सामाधान हुनुपर्ने हो, भएन । समयसँगै फेरि बिस्तारै अस्थायी शिक्षक ठाउँ–ठाउँमा भर्ना हुँदै गए । पोल्टिकल प्रेसरका कारण एसएलसीदेखि बीए पास गर्ने बेरोजगारहरूको अस्थायी शिक्षक नियुक्तिमा प्रेसर पर्दै गयो । ठाउँठाउँमा म्यानेजमेन्ट कमिटीले राख्दै पनि गयो । फेरि अहिले पनि अस्थायी शिक्षकको समस्या छ ।
त्यो समस्या सम्बोधन गर्न म अगाडि बढेको छु । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा एवं प्रधानमन्त्री र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएर आएपछि सबै अस्थायी शिक्षकको मनोबल बढेको छ । हामी आएपछि उहाँहरू लिबरल नै हुनुहुन्छ । नयाँ सरकारमा हामी आएपछि माग पुनः स्मरण गराउनुभएको छ । मैले अस्थायी शिक्षकले राखेका मागलाई संवेदनशील रूपमा लिएको छु ।
अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट सहसचिव हरि लम्सालको संयोजनमा एउटा वार्ता टोली गठन भएको छ । अनशनरत शिक्षक, महासंघ र वार्ता टोली बसेर एउटा कुराको निधो गरेका छौं । अहिले केही सञ्चारमाध्यमले गोपालमानले शिक्षाको गुणस्तर बिगार्ने भो भनेर खेदो खनिरहेका छन् ।
अस्थायी शिक्षकलाई मागेभन्दा बढी दियो भनेर मलाई आरोप लगाएका छन् । तर, मानवीय हिसाबले उहाँहरूको रोदन र क्रन्दनको कुरा सुन्दा मलाई दुःख लागेको छ । जिन्दगीको १५–२० वर्षको युवा जीवन शिक्षामा बिताउनुभयो । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको पनि माग सुन्नुपर्छ । एक वर्ष पहिले अस्थायी शिक्षक परीक्षामा जानेहरू पास भए भने स्थायी हुने तर पास नहुनेले केही नपाउने भन्ने रिक्स थियो । त्यसबेला एकथरी शिक्षकले सुविधा पाउनका लागि फारम भरे । त्यसमध्ये धेरै शिक्षक साथीहरूले परीक्षा दिने हिम्मत गर्नुभएको थियो ।
तर, अहिले आएर रोदन सुन्दा मलाई के लाग्यो भने एकचोटि सबैलाई मौका परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अब सबै शिक्षकले परीक्षा दिनुहुन्छ । परीक्षा र परीक्षणको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । जति पनि योग्य शिक्षक छन्, जो–जति पास हुनुहुन्छ उहाँहरू स्थायीमा जानुहुन्छ । यसका लागि हामीले १९ हजारको दरबन्दी सिर्जना गरेका थियौं । त्यसमा १५–१६ हजारले फर्म भरेका थिए । केहीले भने भरेका थिएनन् ।
यो २६ हजार शिक्षकको माग हो । हामीले अध्ययन गर्दा खासै आर्थिक भार नपर्ने पाएका छौं । सरकारले शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्न नै ऐन संशोधन गरेर परीक्षा दिने नीति बनाउने तयारी गरेको छ । यसमा योग्यताको कुरा तोकिएको छ । हिजो पढाउन सुरु गर्नेले आज परीक्षा दिन पाउने भन्ने हँुदैन । १० गते परीक्षा थियो, दैविक प्रकोपका कारण देखाएर असोज ८ गतेसम्मलाई सारेको छ ।
यो समस्या समाधान हुन्छ । यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने हँुदैन । हाल २८–३० हजार अस्थायी शिक्षक छन् । मानवीयताका हिसाबले उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर कानुन संशोधनको कुरा अघि बढाइएको हो । यसमा सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भने सुधार गर्न सकिन्छ । पास हुने दरबन्दीअनुसार जानुहुन्छ भने फेल हुनेहरूलाई पनि केही न केही दिएर रित्तो हात नपठाउने भन्ने योजना छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी जान मानेका छैनन् । पठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा समूह भन्ने रहेको छ । शिक्षाका कर्मचारी अन्यत्र जानै नपाउने भन्ने छ । हामीकहाँ सिनियर उपसचिव कर्मचारीहरू धेरै छन् । कर्मचारीहरू हामीभन्दा जुनियरलाई हाकिम मानेर जान तयार छैनौं भनिरहनुभएको छ ।
मेरो मान्यता भनेको यसलाई समायोजन गर्नुप¥यो । मन्त्रालयको सचिव पदमा छ भने प्रशासनतर्पm जान सक्ने प्रावधान छ, तर उपसचिव तहका लागि भने त्यो व्यवस्था छैन । शिक्षाको सचिव शिक्षामै बस्नुपर्छ भन्ने छैन ।
जस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यको भन्दा बाहिरको कोही पनि स्वास्थ्य सचिव हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी मात्र सचिव हुन्छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयमा योग्यताअनुसार उपसचिव, सचिव भए जहाँ पनि जान सक्छन् । तर, सहसचिव तहसम्म शिक्षा सेवामै रहनुपर्ने हुन्छ ।
उहाँहरूले आफ्नो मागका बारेमा जिकिर गर्नुभएको छ । अब यसमा मिल्न सक्ने विषय मिलाऊँ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको धारणा छ । स्थानीय विकास र सामान्यको सचिवसँग पनि यसबारेमा मैले छलफल गरें ।
अब अहिले हामीले केही कर्मचारी खटाएका छौं । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मुख्यसचिवको संयोजनमा एक कमिटी बनेर यसले पनि काम गरिरहेको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा तपार्इंले पहल गरिरहनुभएको छ । यसको गठनपछि शिक्षाक्षेत्रमा के सुधार हुन्छ ?
मैले शिक्षाक्षेत्रका विकृतिहरू तल्लो तहदेखि उच्च शिक्षासम्म रहेको पाएको छु । यो सबै कुरा गर्न निकट भविष्यमा नै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गर्दै छु ।
यसका बारेमा मैले पार्लियामेन्टमा पनि कमिटमेन्ट गरिसकेको छु । यसले बौद्धिक व्यक्तित्वहरू राखेर, अनुभवी सबै क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय स्तरीय उच्च शिक्षा आयोग गठन गरेर, एकाध महिनाको समयसीमा दिएर, शिक्षाक्षेत्रका समस्या र सुधारका विषय राखेर मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गर्नेछ । त्यहाँबाट आएको सुझाव लागू गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता लिएको छु ।
मेडिकल शिक्षाको विकृति हटाउन डा. गोविन्द केसी अनशन बसिरहनुहुन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले के–के योजना बनाउँदै छ ?
डा. गोविन्द केसीका निकट मानिसलाई म्यासेज गरेर यस सम्बन्धमा मैले छलफल गरेको छु । यो सरकार भर्खर मात्र आएको छ । म पनि केही दिनका लागि व्यावसायिक शैक्षिक भ्रमणका लागि बाहिर जाँदै छु ।
शिक्षकलाई राजनीति गर्न पाइन्छ भनेको छैन । नियमअनुसार शिक्षकले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनाएर सम्बन्धित निकायमा पठाएको अवस्था छ । दसैंसम्म भोक हड्ताल नगरिदिन आग्रह गरेका छौं । यो समस्याका लागि सबै मिलेर समाधान गर्ने भनेका छौं ।
बाढीले शिक्षाक्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा भएको क्षतिबारेमा मन्त्रालयले कस्तो योजना बनाएको छ ?
बाढीपहिरोले शिक्षाक्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिको विवरण आउने क्रममा छ । मैले डुबान र पहिरोमा परेका विद्यार्थीको शिक्षा र पुस्तकका सम्बन्धमा जतिसक्दो चाँडो सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छु ।
बाढीपहिरोले विद्यार्थीको किताबमा क्षति पुगेको छ । पाठ्यपुस्तमा भएको क्षति विवरण संकलन गरेर तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा पु¥याउन अनुरोध पठाएका छौं । भूकम्पले विद्यालयमा क्षति पुगेर जसरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ, त्यसरी नै बाढीपहिरोमा परेका विद्यालयको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ ।
विद्यालय र विद्यार्थीमा परेको क्षतिका लागि काम गर्न सचिव र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छु । पुस्तकका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पनि भनेको छु । विद्यालय खुल्ने क्रममा रहेका छन् । विद्यार्थीसँग पुस्तक नभए तत्काल निःशुल्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छु ।
शिक्षा स्थानीय तह शिक्षामन्त्री मेडिकल शिक्षा बाढीपहिरो प्राविधिक क्षेत्र